12 Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 12 Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba UK, Famba Europe
Kubva pane inoshamisa yekare theatre pasi penyeredzi kuenda kune dzinoshamisa uye dzakanaka dzimba, izvi 12 nzvimbo dzepamhanzi dzakanakisa pasi rese dzakanakira kana uchinyatsoda kuona konzati dzakanakisisa dzese. Shanghai, Berlin, London, uye Italy ingori mashoma enzvimbo dzakanakisa dzekunakidzwa nekonsati yako inotevera yemimhanzi.
1. Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika: Royal Albert Hall MuLondon
Yakavhurwa neimwe yevakadzikadzi vane mukurumbira pasi rese, Mambokadzi Victoria, iyo Royal Albert Hall muLondon, ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzemimhanzi pasirese. Sezvaunopinda iwe unobva wabvuma kuti ndeyehumambo zvechokwadi. Kubva pakushongedza kuenda kumhepo kana magetsi abuda, konzati pano ichakupa goosebumps.
kubva 1871 mimhanzi vateveri veese masitaera, enda kuRoyal Albert Hall ye 365 mazuva. saka, kunyangwe uri jazi, dombo, kana wekare mimhanzi fan, konzati yemimhanzi mhenyu kuRoyal Albert Hall chiitiko chausingade kupotsa paunenge uri muLondon. Iyo Royal Albert Hall iri muSouth Kensington, uye inowanikwa nyore nepombi.
2. Iyo O2 Arena MuLondon
Yechipiri yakanakisa mimhanzi nzvimbo mune yedu 12 nzvimbo dzepamhanzi dzakanakisa pasi rese iO2 Arena muLondon. Ndiyo imwe yenzvimbo hombe dzemimhanzi mhenyu muEurope, nenyika, ine nzvimbo ye 20,000 vateereri. Uyezve, mu 2008 yakatodarika kutengeswa kwetikiti kweMadison Square Garden.
Muchinda, Cirque Du Soleil, Alicia Keys, uye maBrit Awards, ingori mashoma ezviitiko zvemimhanzi zvaunogona kunakidzwa muO2 Arena. Iwe unozofanirwa kufamba kunze kwenzvimbo yeLondon, kuGreenwich, asi kune yakanakisa mimhanzi ruzivo, zvakakodzera zvachose kunetswa.
3. Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika: Musikverein MuVienna, Ositiriya
Yakagadzirwa seyakakwana mimhanzi bhokisi, chirevo chokunaka, ari Wiener Musikverein, kana musangano wemimhanzi, ndiyo yekupedzisira classic mimhanzi nzvimbo muEurope. Kumba kune yeViennese philharmonics, imba yemimhanzi yakagadzirwa mukirasi European temberi style, naFresco weApollo padenga.
364 mazuva pagore, vanoda mimhanzi kubva kutenderera pasirese, kuenda kuVienna kune chiitiko chinonakidza uye chisingakanganwiki mumhanzi. Kutenda kune iyo yekuvakisa, acoustics, mumhanzi, nzvimbo, uye chadenga, iyo Musikverein iri pamusoro pe 12 nzvimbo dzakanakisisa dzemimhanzi pasi.
4. Verona Arena MuItaly
The 12 nzvimbo dzakanakisisa dzemimhanzi munyika dzinongofanirwa kuratidza nzvimbo yakanakisa yeepic opera performance. Iyo Verona Arena yakavakwa muzana ramakore rekutanga, nanhasi uchachiwana chakamira, uye kubata vateveri veopera kubva kumativi ese epasi.
Iyo Verona Arena idombo remhepo rakavhurika Amphitheatre, uye madziro ayo anokuudza nyaya dzevagadiator uye nekuzevezera mazwi emapop pop. Iyo elliptical chimiro inoisa iyo Verona nhandare seimwe yenzvimbo dzakanakisa muItari kune mhenyu mimhanzi konzati. The acoustics, nzvimbo yacho yakavhenekerwa usiku, inoita imwe yenzvimbo dzakasarudzika dzemimhanzi muEurope.
5. National Center yeAnoratidzira Hunyanzvi MuBeijing, China
Izai rakaumbwa, ano unyanzvi chidimbu, nzvimbo yenyika yehunyanzvi hwekuita ndeimwe yezvivakwa zvinoyevedza muBeijing. Pamusoro peiyo fomu yepakati yakasarudzika, kune dziva rekugadzira rakatenderedza.
Iyo yenyika yepakati yeanoratidzira hunyanzvi ndiyo nzvimbo yakanakisa yekunakidzwa opera uye kurarama makonzati muChina. zvisinei, kana iwe uchida chinyakare chiChinese mimhanzi mashandiro, ipapo imba yemakonzati ndiyo nzvimbo yakanaka.
6. Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika: Arena YeNimes MuFrance
Nhandare yekare yeRoma inogona kubata kusvika kunhamba yakatanhamara ye 24,000 vanoda mimhanzi. Iyi inoshamisa mimhanzi venue inokwezva zviuru zvevashanyi gore rega, kune zvimwe zveanonyanya kufunga-mimhanzi zviitiko muFrance.
Kubva panguva yekurova pop kuna Hans Zimmer, rarama zviitiko zvemimhanzi in the Arena of Nimes are zvisingakanganwiki. Nemadziro akavhenekerwa nemwenje ine mavara usiku, masystem aripo – Ikonzati pano iri kunyatso kusimbisa.
Paris kuNimes Ine Chitima
Montpellier kuNimes Ine Chitima
Marseille kuenda kuNimes Ine Chitima
Nice kuna Nimes Nechitima
7. Masango groyne muBerlin
Inowanikwa muOlympic Park mu guta rebato Berlin, iyo Waldbuhne inhandare yemitambo yakasununguka. Pearl Jam, iyo Berlin philharmonic, uye Taylor Swift ndivo vashoma chete vevanyori vanopa makonzati munzvimbo hombe yemimhanzi.
Iyo Waldbuhne yakatanga kuvakirwa mitambo yeOlympic mu 1934, asi kubvira ipapo yave imwe yeiyo 12 nzvimbo dzakanakisa dzemimhanzi kuGerman, nenyika. Iwe unogona kunge uri mumwe werombo rakanaka 20,000 vanhu vanopinda mimhanzi inorarama, yakakomberedzwa nemasango. Iyi inonakidza mimhanzi nzvimbo yakabata akawanda epic makonzati pamusoro pemakore, saka iwe unogona kuve chikamu chenhoroondo yemimhanzi mune inotevera huru mimhanzi chiitiko kuGerman.
8. Yuyintang MuShanghai, China
Wedu 12 akanakisa emimhanzi venzvimbo rondedzero haizove yakakwana pamwe yepamusoro yepasi pevhu mimhanzi kirabhu muChina. Yuyintang muShanghai haina kukura senge dzimwe nzvimbo dzemimhanzi pasi, asi ndeimwe yeakanakisa.
Zviri padyo, uye imwe-ye-ye-mhando, saka iwe urimo kune epic mimhanzi husiku. Vateveri veRock vanobva kupasi rese, vane Yuyintang kirabhu pane avo akanakisa matombo makirabhu runyorwa rwekupedzisira 10 makore. saka, inogona kunge isina chinonakidza chekunze kwekunze, asi manzwi uye vibes zvichaita kuti iwe bounce.
9. Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika: Felsenreitschule MuSalzburg, Ositiriya
Paunenge uchitsvaga tikiti yeiyo Mutambo weSalzburg, uko kwavakapfura maSounds eMumhanzi – unogona kuva nechokwadi chekuti nzvimbo yemumhanzi iyi inoshamisa. The Felsenreitschule imba yemumhanzi yakagadzirirwa baroque, ne 96 arcades kuseri kwechikuva.
Panguva yemitambo yemimhanzi, iyo arcades inemadziro yakavhenekerwa nemavara, kutora vateereri zvakanyanya. Zvisinei nezvaunofarira zvemimhanzi, chiratidziro kuAustria Felsenreitschule chiitiko chese pfungwa – chaizvo mimhanzi inofanira kuita uye kukanganisa.
10. Iyo Yekare Theatre MuTaormina, Itari
Kutarisana nemhenderekedzo yeCalabrian, iyo yekare yemitambo muTaormina yakavakwa nemaGreek kutenderedza 3rd century BC. Chinangwa cheiyo inoshamisa theatre yaive yakakura kwazvo mitambo.
Nemaonero anoyevedza egungwa nenyika, iwe uchawana ino yeimwe yeinotyisa nzvimbo dzemimhanzi nzvimbo munyika. saka, ine nzvimbo yeorchestra, vachitamba, vaimbi, iwe uchaona kuti iyi yekare theatre inzvimbo inonakidza yekuvira kwezuva kana kubuda kwezuva mimhanzi zviitiko.
11. Mao Livehouse MuShanghai
Kubva pamagetsi kuenda kupop tunes, Mao Livehouse ndiyo nzvimbo hombe yemimhanzi muShanghai. saka, kana iwe uchida kuona zvakanakisa zveShanghai husiku uye mimhanzi chiitiko, ipapo Mao Livehouse ndiyo nzvimbo yeIT yevagari vemo uye vashanyi.
Mao Livehouse ine akanakisa kurira system muChina, ichiita iyo yemhando yepamusoro mimhanzi nzvimbo, uye nzvimbo yekurega bvudzi rako pasi uye dombo.
12. Akanakisa Mimhanzi Zviitiko Munyika: Iyo Yakare Theatre MuOrange, Furanzi
Iyo yemitambo yeRoma muOrange yanga ichivaraidza vateveri vemimhanzi kubvira muzana ramakore rekutanga AD. Inowanikwa mutaundi reOrange, inoita makonzati, uye mutambo wepagore wezhizha opera muFrance.
Iwe unogona kuve mumwe we 10,000 vanhu vachinakidzwa nemumhanzi usingakanganwiki mumitambo yakachengetedzwa kwazvo muEurope. Iyo yemitambo yeorenji ndiyo chitima tasva kure kubva kuMarseille, asi pfupi chitima rwendo achatora iwe shure munhoroondo, kusvika kunguva dzevaRoma, uye kumitambo inoshamisa kwazvo mumhanzi wenyika.
pa Chengetedza Chitima, tichave tichifara kukubatsira kuronga yako inotyisa zororo kune iyo 12 yakanakisisa mumhanzi nzvimbo munyika nechitima.
Iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "12 Yakanyanya Nziyo Mimhanzi MuNyika" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dsn‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / ja kuita / ru kana / de uye mimwe mitauro.
BestConcertsEurope	BestMusicVenuesInTheWorld	konzati	LiveMusicEurope	musicvenue	MusicVenues
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Dzidzisai Kufamba Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba UK, Famba Europe
Nzira Dzakanakisisa dzeChitima dzeEurope
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Norway, Chitima Kufamba Switzerland, Famba Europe